YouTube မှာ ဘယ်လောက်အချိန်ဖြုန်းနေလဲဆိုတာကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီ
28 Aug 2018 . 3:08 PM
Google ကနေ Android9Pie မှာ Digital Well-being Feature တစ်ခုကို စတင်ထည့်သွင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Feature က ကိုယ်တစ်ရက်ကို ဖုန်းကို ဘယ်လောက်အသုံးပြုသလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးတဲ့ Dashboard Feature နဲ့ ညဘက်မှာ Screen ကို Grayscale ပြုလုပ်ပြီးတော့ Notifications တွေကို ပိတ်ပစ်တဲ့ Do Not Disturb ကို On ပေးတဲ့ Wind Down Feature တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ YouTube ကလည်း အလားတူ Feature တစ်ခုကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။
အခု Feature အသစ်ကတေ့ာ့ YouTube ကနေ Account Menu Setting ထဲမှာ တစ်နေ့ကို YouTube ဘယ်လောက်ကြည်နေ့သလဲဆိုတာကို ပြန်သိနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခုလိုမျိုး ပြန်သိနိုင်မယ့် Feature ကိုတော့ Today ၊ Yesterday နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်ကြည့်ရှုနှုန်းတွေကို ပြန်သိနိုင်မယ့်အပြင် တစ်နေ့ကို ဘယ်လောက်ပုံမှန်ကြည့်ဖြစ်သလဲဆိုတာကိုပါ ပြန်သိနိုင်မယ့် Daily Average Limit ကိုပါ သိနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုလိုမျိုး YouTube ကနေ ဒီလိုမျိုး ပြန်ကြည့်လို့ရအောင် လုပ်ပေးလိုက်တာကတော့ အသုံးပြုသူတွေကို ဒီ နည်းပညာတွေအပေါ်မှာ အသုံးချနေမှုကို ပြန်ပြီး ဆန်းစစ်တတ်ဖို့အတွက်နဲ့ တကယ်လို့ အချိန်အကြာကြီးအသုံးပြုနေဖြစ်တယ်ဆိုရင် Disconnect လုပ်နိုင်စေဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
YouTube ဟာ ယခင်ထဲကလည်း Video တွေကို အချိန်အကြာကြီး ကြည့်နေဖြစ်တယ်ဆိုရင် ခတ္တနားနိုင်တဲ့ TakeaBreak Section ကို ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပြီးတော့ ယခု Feature က ဒုတိယမြောက် ထည့်သွင်းပေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကုမ္ပဏီတွေအကုန်လုံးက ဒီနည်းပညာတွေကို အသုံးပြုနေမှုကို လျော့ချဖို့ စီစဉ်နေပုံရပါတယ်။
Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင်တင်ဆက်နေသည့် စာမျက်နှာများတွင် အခရာမှတင်ဆက်ထားသည့် ဆောင်းပါးများ၊ သတင်းများကို ခွင့်ပြုချက် တစ်စုံတစ်ရာ ရယူထားခြင်းမရှိဘဲ စီးပွားဖြစ် ကူးယူသုံးစွဲနေသည်များကို တွေ့ရှိနေရပါသည်။ အခရာစာမျက်နှာအား တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း ဝေမျှသည်ကို အသိအမှတ်ပြုကျေးဇူးတင်သော်လည်း စီပွားဖြစ်တည်ထောင်ထားသည့် စာမျက်နှာများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် ကူးယူတင်ဆက်နေသည်များကိုမူ ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အခရာမီဒီယာမှတင်ဆက်နေသည့် အကြောင်းအရာများထဲမှ စာသားအချို့ကိုဖြစ်စေ ၊ အပုဒ်လိုက်ဖြစ်စေ ၊ တစ်ပိုဒ်ခြင်းဖြစ်စေ ကူးယူသုံးစွဲခြင်းမပြုရန်နှင့် ဆက်လက်ပြုလုပ်ပါက ခိုးယူသုံးစွဲနေသည့် စာမျက်နှာများကို အမည်နှင့်တကွ အများသိစေရန်ကြေညာသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဥပဒေအရ အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
Google ကနေ Android9Pie မှာ Digital Well-being Feature တဈခုကို စတငျထညျ့သှငျးလာပွီဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါ Feature က ကိုယျတဈရကျကို ဖုနျးကို ဘယျလောကျအသုံးပွုသလဲဆိုတာကို ဖျောပွပေးတဲ့ Dashboard Feature နဲ့ ညဘကျမှာ Screen ကို Grayscale ပွုလုပျပွီးတော့ Notifications တှကေို ပိတျပဈတဲ့ Do Not Disturb ကို On ပေးတဲ့ Wind Down Feature တှပေဲဖွဈပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာ YouTube ကလညျး အလားတူ Feature တဈခုကို မိတျဆကျလိုကျပါပွီ။
အခု Feature အသဈကတေ့ာ့ YouTube ကနေ Account Menu Setting ထဲမှာ တဈနကေို့ YouTube ဘယျလောကျကွညျနေ့သလဲဆိုတာကို ပွနျသိနိုငျမယျလို့ သိရပါတယျ။ အခုလိုမြိုး ပွနျသိနိုငျမယျ့ Feature ကိုတော့ Today ၊ Yesterday နဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျသတ်တပတျကွညျ့ရှုနှုနျးတှကေို ပွနျသိနိုငျမယျ့အပွငျ တဈနကေို့ ဘယျလောကျပုံမှနျကွညျ့ဖွဈသလဲဆိုတာကိုပါ ပွနျသိနိုငျမယျ့ Daily Average Limit ကိုပါ သိနိုငျမယျလို့ သိရပါတယျ။
အခုလိုမြိုး YouTube ကနေ ဒီလိုမြိုး ပွနျကွညျ့လို့ရအောငျ လုပျပေးလိုကျတာကတော့ အသုံးပွုသူတှကေို ဒီ နညျးပညာတှအေပျေါမှာ အသုံးခနြမှေုကို ပွနျပွီး ဆနျးစဈတတျဖို့အတှကျနဲ့ တကယျလို့ အခြိနျအကွာကွီးအသုံးပွုနဖွေဈတယျဆိုရငျ Disconnect လုပျနိုငျစဖေို့ ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
YouTube ဟာ ယခငျထဲကလညျး Video တှကေို အခြိနျအကွာကွီး ကွညျ့နဖွေဈတယျဆိုရငျ ခတ်တနားနိုငျတဲ့ TakeaBreak Section ကို ထညျ့သှငျးပေးခဲ့ပွီးတော့ ယခု Feature က ဒုတိယမွောကျ ထညျ့သှငျးပေးမှုဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ အခုနောကျပိုငျးမှာ ကုမ်ပဏီတှအေကုနျလုံးက ဒီနညျးပညာတှကေို အသုံးပွုနမှေုကို လြော့ခဖြို့ စီစဉျနပေုံရပါတယျ။
by Zawyè .3days ago